कमल पौडेल : साताको ब्लगर - MeroReport
कमल पौडेल : साताको ब्लगर
वाणगंगा ५ कपिलबस्तु निवासी कमल पौडेल कपिलवस्तुको सामुदायिक एफएम बुद्ध आवाजमा प्राबिधिक तथा कार्यक्रम प्रस्तोताको रुपमा काम गर्छन । नेपाली बिषयमा स्नातकोत्तर प्रथम वर्षमा अध्ययनरत कमल ब्लगिङको क्षेत्रमा भर्खर बामे सर्दैछन् । उनले विशेष गरी साहित्यिक बिधामा ब्लगिङ गर्दछन् ।
नयाँ ब्लगरहरुलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने क्रममा हामीले यस साता कमल पौडेललाई साताको ब्लगरको रुपमा फिचर गरेका छौँ :
सामान्य तरिकाले नै बितिरहेको छ । बिहान उठ्ने, दैनिक नित्यकर्म र काम नियमित कुरा । फुर्सदको समयमा उपन्यास कथा पढ्ने , कबिता गजल कथा लेख्ने, फेसबुक गुगल आदिमा साथीहरुसँग गफगाफ गरेर नै बितेको छ मेरो दिनचर्या ।
तपाईंको पेशाको बारेमा बताइदिनुस् न ?
अहिले म बिद्यार्थी हो । त्यसबाहेक म एक सञ्चारकर्मी पनि हो । अहिले कपिलबस्तुकै रेडियोमा प्राबिधिक तथा कार्यक्रम प्रस्तोताको रुपमा काम गर्छु ।
ब्लगिङकै कुरा गरौ । कसरी थाल्नुभयो ?
मैले ब्लगिङ सुरु गरेको धेरै भएको छैन । यस्तै डेढ बर्ष भयो बनाएको , अपडेट गर्न थालेको ४-५ महिना जति भयो । मसँगै काम गर्ने एकजना साथीले इन्टरनेटमा केही गरिरहेको देखेर सोधेँ । उहाँले भन्नुभयो आफ्नै बेबसाइट जस्तै हो यसमा आफुले लेखेका सामाग्रीहरु र आफ्नो बारेमा लेखेर पोष्ट गर्न सकिन्छ । यति कुरा उहाँबाट थाहा पाएर मलाई यो ब्लग बनाउने रहर आयो र आफै सुरुवात गरे । मैले ब्लगमा कथा, कबिता, गजल आदि पोष्ट गर्छु ।
खासगरी मेरो साहित्यमा रुचि भएकोले कबिता गजल आदि लेख्ने गर्छु । र तिनै रचनाहरुलाई यो इन्टरनेटको युगमा आफ्ना बिचारहरु संसारभर फैलाउन र सबै सामु राख्न सहज र राम्रो माध्यम लागेकोले ब्लगिङ गर्न प्रेरित भएको हुँ ।
तपाइँ रेडियवमा पनि काम गर्नुहुन्छ । ब्लगिङ र मुलधारको मिडियाबिच के फरक पाउनुहुन्छ ?
मुलधार मिडियामा बिशेष गरी आफ्नो कुरा भन्दा पनि अरुको कुरालाइ ध्यानपूर्बक राखिन्छ । ब्लगमा आफुले स्वस्फूर्त लेखेका बिचारहरु त्यो पनि नि शुल्क राख्न पाइन्छ । त्यसैले मुलधार मिडिया भन्दा ब्लग स्वतन्त्र र निष्पक्ष माध्यम हो जस्तो मलाई लाग्छ ।
पक्कै पनि गर्छ किनकी इन्टरनेटको जमानामा ईन्टरनेटबाट नै पहिचान बनोस् भन्ने मान्छेले चाहन्छन् । त्यसैले ब्लग पनि इन्टरनेटबाट नै अपडेट हुने भएकाले यस्ले छुट्टै पहिचान बनाउन मद्दत गर्छ जस्तो मलाइ लाग्छ ।
ब्लगिङ गर्दा बिषेशत ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भने कसैलाई नराम्रो अभिव्यक्ती दिनुभएन र निरन्तरता हुनुपर्यो । राम्रो र रोचक बिषयवस्तु हुनुपर्छ ।
ब्लगिङ गर्दाको कुनै रमाइलो अनुभव ?
ब्लग डेढ बर्ष पहिले बनाएको भए पनि अपडेट सुरु गरेको धेरै भएको छैन । त्यसैले त्यस्तो भन्नै पर्ने रमाइलो अनुभबव अझै छैन भन्नुपर्छ ।
कपिलवस्तुमा इन्टरनेट पहुँच कस्तो छ ?
राम्रै छ भन्नुपर्छ पछिल्लो दुई वर्ष यता ।
कपिलवस्तुमा ब्लगिङ गर्ने ट्रेन्ड कस्तो देखिएको छ ?
खासै देखिएको छैन ।
ब्लगबाहेक तपाई अरु कुन–कुन सोसल मिडियामा हुनुहुन्छ?
फेसबुक , ट्वीटर,गुगल, ओर्कुटमा पनि छु ।
पछिल्लो समयमा हेर्नेहो भने निकै राम्रो भूमिका खेलेको मैले देखेको छु । कुनै पनि समाचार अथवा कुनै कार्यक्रमको सुचना सिधै सोसल मिडियाबाट प्राप्त गर्न थालिएको छ । संसारको कुनै कुनामा भएको साथी टाढा छैन, दिनहुँ गफ हुँदैछ । यसले सुचना आदान-प्रदानमा निकै सहयोग पुर्याएको जस्तो मलाइ लाग्छ ।
कमलको ब्लग लिङ्क: My Life My Story '
Comment by Kamal Paudyal on September 27, 2012 at 4:23pm
धन्यवाद तपाईहरुको साथ र स्नेह लाई सबिता अजिता अर्जुन आगामी दिनहरुमा सहयोग को अपेक्षा गर्दछु
Comment by sabita Acharya on September 17, 2012 at 10:37am
badhai6kamal g
Comment by Arjun Apawad on September 15, 2012 at 6:46pm
Comment by Ajeeta Sigdel on September 13, 2012 at 12:37pm
Comment by MeroReport on September 13, 2012 at 11:37am
Congratulations Kamal ji.